Soomaalidii lagu laayay Hawaday oo aas loogu sameeyay Jig Jiga - BBC News Somali
Soomaalidii lagu laayay Hawaday oo aas loogu sameeyay Jig Jiga
Sida uu BBC-da u xaqiijiyay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha saxaafadda Maxamed Bille Xasan, waxaa jira labo xabaalood oo kale oo qodan oo lala sugayo meydad lasoo wado. Aaska ayaa waxaa ka qeybgalay dadweyne aad u faro badan iyo mas'uuliyiin dowladeed.
Dadka lafahooda lasoo baxsaday waxaa ka mid ah Axmed Maxamuud Ciise oo isaga oo ku sugan magaalada Jig Jiga u waramay BBC-da, wuxuuna yiri "anaga oo aanan waxbo iska jireynin ayaa waxaa nasoo weeraray ciidamada booliiska Oromada iyo dhalinyaro faashash ku hubeysan, inankii oo markaas suuliga aaday ayay ku dageen, inagiina markaan aragnay waxa dhacaya aqalka xagga dambe ayaan ka baxnay, waxaana nasoo badbaadiyay ciidammada militariga ".
Magaalada Harar waxaa la'isugu geeyay dad badan oo Oromo ah oo laga soo daadgureeyay deegaanka Soomaalida cabsi laga qabo in xiisadda ay saamayso.
Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sheegtay in boqolaal Soomaali ah la laayay
Deegaanka Soomaalida oo sheegay in Oramadu ay boqolaal dishay
Lix hoggaamiye Afrikaan ah oo xilka ka dhaxlay aabbeyaashood
Midowga Afrika oo si kulul uga hadlay muddo kordhinta Farmaajo
22 Abriil 2021
"Haddii oksijiin la waayo, dad badan ayaa dhimanaya sida kalluunku uu u dhinto marka biyaha laga soo saaro,"